Al Shabaab oo Weeraray Waqooyga Kenya |
Al Shabaab oo Weeraray Waqooyga Kenya
purchase sildenafil, purchase zithromax. Kooxo hubeysan oo lagu tilmaamay al Shabaab ayaa Weeraro kala duwan waxaa ay ku qaadeen Degaanka Kullan oo ku yaala Gobolka Waqooy Bari Dalka Kenya.
Weerarkan oo ahaa mid Culus islamarkaana geystay Khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa lagu qaaday Degaanka Kullan iyadoona la sheegey in u jeedka Weerarka uu ahaa Khasaaro gaarsiinta Saldhig Boolis oo ku yaala Degaankaasi.
Waxaa Saakay laga soo sheegayaa Degaanka Kulan in ay ka maqan tahay Igaarsiinta islamarkaana aan la ogaan Karin Cida sida rasmiga ah ee gacnta ku heysa Degaankaasi maadaama uu Xalay Dagaal Culus ka dhacay.
Degaankan lagu magacaabo Kullan ayaa waxuu dhaa Xadka ay wadaan Dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya Iyadoona inta badan Al Shabaab ay Weerar ka geystaan Kenya.
Sikastaba, Ilaa iyo hada lama oga Khasaaraha Dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay Dagaalkii lagu qaaday Degaanka Kullan ee Waqooyi Barri Dalka Kenya waxaana xusid mudan in iminka halkaasi ay ka maqan tahay Alaada Isgaarsiinta.